အင်တာနက် ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေး - ဝီကီပီးဒီးယား
အင်တာနက်ဆိုင်ရာ ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေး ဆိုသည်မှာ အင်တာနက် ပေါ်တွင် သတင်းအချက် အလက်များပေးပို့ခြင်း သို့မဟုတ် ဖြန့်ဖြူးကူးယူခြင်းတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ မိမိပိုင် လွတ်လပ်မှုကို လုပ်ပိုင်ခွင့် သို့မဟုတ် လိုအင်ဆန္ဒ ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် လူတစ်ယောက်အနေနှင့် သူ၏ သတင်းအချက်အလက်များကို အင်တာနက်ပေါ်တွင် မည်သည့်ပုံစံ သို့မဟုတ် မည်မျှသော ပမာဏ အထိဖော်ပြလိုခြင်းနှင့် ထိုအချက်အလက်များကို မည်သူတို့ကို သိခွင့်ရစေလိုခြင်း စသည်တို့ ပါဝင်သည်။ ထိုဝေါဟာရကို ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အခြေခံသော အင်တာနက်ဆိုင်ရာကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေး ဟုလည်း နားလည်သတ်မှတ်ပြီး အနက်ရှင်းရသော် အင်တာနက် အသုံးပြုသူ တိုင်း ပိုင်ဆိုင်သော အင်တာနက်ဆိုင်ရာ ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေး ဖြစ်သည်။
အင်တာနက်ဆိုင်ရာ ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးမှာ ကွန်ပျူတာ ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေး၏ ကဏ္ဍခွဲတစ်ခု ဖြစ်လာသည်။ အင်တာနက်လုံခြုံရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာ နယ်ပယ်တွင်းမှ ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင် အချို့က ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးဆိုသည်မှာ မရှိကြောင်း ယုံကြည်ကြသည်။ အင်တာနက် ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေး ကိစ္စရပ်များကို သီးသန့်စူးစမ်းရှာဖွေသူ Steve Rambam (စတိဗ် ရမ်ဘမ်) ၏ အဆိုအရဆိုလျှင် "ကိုယ်ပိုင်အခွင့် အရေးဆိုတာ ဆုံးသွားပြီ– အဲဒါကို လက်ခံလိုက်စမ်းပါ" ဟူ၍ဖြစ်သည်။ လုံခြုံရေး ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် Bruce Schneier (ဘရုစ် စန်နီယာ) က သူ၏ စာတမ်းဖြစ်သော ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေး၏ တန်ဖိုး တွင် ဆိုထားသည်မှာ "ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးဆိုတာ ကျွနု်ပ်တို့အနေနဲ့ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှု စဉ်ကာလမှာ ဘာမှ အမှားအယွင်း မလုပ်မိတာတောင်မှ ကျွနု်ပ်တို့ကို စွမ်းအားရှိသူတွေရဲ့ နှိပ်ကွပ်မှုကနေ ကာကွယ်ပေးပါတယ်" ဟူ၍ဖြစ်သည်။
၁ ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေး ၏ အဆင့်များ
၂ အင်တာနက်ဆိုင်ရာ ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေး၏ အန္တရာယ်များ
၃ HTTP cookie များ
၄ ရုတ်တရက်ရရှိသော အင်တာနက်အတွင်း ကျန်ရှိနိုင်သော ဖိုင်ငယ်များ(Flash cookies)
၆ အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ
၇ သတင်းအချက်အလက်များ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း
၈ ဥပဒေဘက်မှ ခြိမ်းခြောက်မှု အန္တရာယ်များ
၉ တိကျသော အထောက်အထားများ
၁၀ ရှာဖွေဝန်ဆောင်မှု ပေးသူတို့၏ သတင်းအချက်အလက်များနှင့် ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းချက်
၁၁ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နှင့် Zeigler (ဇယ်ဂျလာ)
၁၂ ပြည်နယ် နှင့် Reid
၁၃ Robbins နှင့် အောက် Merion ဒေသဆိုင်ရာကျောင်း
၁၄ ဆရာများ နှင့် MySpace (မိုင် စပေ့)
၁၅ အင်တာနက် ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေး နှင့် နှင်းမုန်တိုင်း ဖျော်ဖြေမှု (Blizzard Entertainment)
ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေး ၏ အဆင့်များ[ပြင်ဆင်ရန်]
အင်တာနက်ဆိုင်ရာ ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးတွင် သာမန်စိတ်ဝင်စားမှုသာရှိသော သူတို့အတွက် လုံးဝ အမည်လျှို့ဝှက်ခြင်း ကိုရရှိရန် မလိုအပ်ပေ။ အင်တာနက် အသုံးပြုသူတို့ အနေနှင့် ကိုယ်ပိုင် သတင်းအချက်အလက်များ ထိန်းချုပ်ဖော်ပြခြင်းဖြင့် လုံလောက်သော လျှို့ဝှက်မှု အဆင့်ကို ရရှိပါသည်။ အိုင်ပီလိပ်စာများ ဖော်ပြခြင်း၊ မိမိဖြစ်ကြောင်းအသိအမှတ်မပြုနိုင်သော ဖော်ပြမှုနှင့် အလားတူ သတင်းအချက်အလက်များသည် အသုံးပြုသူတို့ အနေနှင့် ထိုအသေးစိတ်တို့ကို သေချာထိန်းသိမ်းရန် အမှောင့်ဆော့ဖ်ဝဲလ်တို့ကို မပြင်ဆင်ဘဲ သုံးခြင်းတို့ဖြင့် အလွယ်တကူ ဆုံးရှုံးခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ အခြားတစ်ဘက်မှကြည့်လျှင် အချို့သူများသည် ပိုမိုသာလွန်သော ကိုယ်ပိုင် အခွင့်အရေးကို လိုချင်ကြသည်။ ထိုကိစ္စရပ်မျိုးတွင် သူတို့သည် ကိုယ်ပိုင်လုံခြုံမှုကို သေချာစေရန် အင်တာနက်ဆိုင်ရာ အမည်လျှို့ဝှက်ခြင်း ကို ကြိုးပမ်းကြလိမ့်မည်။ ၎င်းမှာ အင်တာနက်ကို အသုံးပြုရာတွင် အခြားမည်သည့် ပြင်ပသူကိုမှ မိမိမှန်း လက်ခံ သတ်မှတ်နိုင်စေသော သတင်းအချက်အလက်များ နှင့် အင်တာနက် ဆောင်ရွက်မှုများကို ချိတ်ဆက်နိုင်ခွင့်မရစေရန် ပြုလုပ်သည်။
မိမိ၏ သတင်းအချက်အလက်များ လျှို့ဝှက်ထားရန်အတွက်မှာ မိမိတို့အနေနှင့် အွန်လိုင်းတွင် မည်သည်တို့ကို ဖြည့်သွင်းသည်၊ မည်သည်တို့ကို ကြည့်ရှုသည် ကို သတိထားကြရန် လိုအပ်သည်။ ဖောင်များကို ဖြည့်သွင်းခြင်း နှင့်ကုန်ပစ္စည်းများကို ဝယ်ယူ ခြင်းတို့ ပြုသောအခါတွင် ထိုသတင်းအချက်အလက်များမှာ လျှို့ဝှက်ခြင်းမရှိတော့သဖြင့် မိမိ တို့ကို ခြေရာခံမှု ပြုလုပ်၍ ကုမ္မဏီများအနေနှင့် အမှောင့် ဆော့ဖ်ဝဲလ်များ၊ ဆင်တူသော ထုတ်ကုန်တို့အတွက် ကြော်ငြာများ ပို့ခြင်းတို့ ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ကိုယ်ပိုင် သတင်းအချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်၍ နိုင်ငံဥပဒေတွင်- Nevada (နီဗာဒါ) နှင့် Minnesota (မင်နီဆိုတာ) တို့၌ အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများအား သူတို့၏ သုံးစွဲသူတို့ နှင့်ပတ်သက်၍ ကိုယ်ပိုင် သတင်းအချက်အလက်များကို ထိန်းသိမ်းထားစေသည်။ သုံးစွဲသူမှ သူ၏ သတင်း အချက်အလက်များကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းကို ခွင့်မပြုမှသာ ၎င်းမှာ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ပြည်နယ် ဥပဒေပြုသူများ ညီလာခံအရ၊ အောက်ပါ ပြည်နယ်များတွင် သူတို့၏ နိုင်ငံသားများ၏ ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေး့နှင့် ပတ်သက်၍ ဥပဒေများ ထုတ်ပြန်ထားရှိသည်။
Minnesota (မင်နီဆိုတာ) ဥပဒေပြုအာဏာပိုင်အဖွဲ့က ပြဋ္ဌာန်းသည့် ဥပဒေ §§ ၃၂၅M.၀၁ မှ .၀၉ အထိတွင် သုံးစွဲသူ၏ နေရပ်လိပ်စာ သို့မဟုတ် အီးမေး(လ်)လိပ်စာ သို့မဟုတ် တယ်လီဖုန်းနံပါတ် အပါအဝင် အင်တာနက် သို့မဟုတ် အွန်လိုင်း ကြည့်ရှှုမှု ဖြစ်စေ၊ အသုံးပြုသူ၏ အချက်အလက်များ သိမ်းဆည်းထားသော ပစ္စည်းတို့မှ ပါဝင်သောအချက်အလက်များဖြစ်စေ သို့မဟုတ် မိမိမည်သူဟု သက်သေပြု ဖော်ထုတ်နိုင်သော သတင်းအချက်အလက်များ ကို အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူတို့မှ ထုတ်ဖော်ခြင်း မပြုရဟု တားမြစ်ထားသည်။ သတင်း အချက်အလက်များကို ဖော်ကိုဖော်ပြရမည် ဟူသော ထိုထိုသော အခြေအနေများဖြစ်သည့် ဂျူရီလူကြီးများမှ ဖြစ်စေ၊ ပြည်နယ် သို့မဟုတ် ဗဟိုအစိုးရနှင့်ဆိုင်သော ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် ဥပဒေ ဆိုင်ရာ ဥပဒေဝန်ထမ်းတို့မှ ဥပဒေဖိအားပြုမှု ဖြစ်စေ၊ တရားရုံး သို့မဟုတ် တရားရုံး၏ အမိန့် သို့မဟုတ် တရားရုံး၏ သက်ရောက်မှု ဖြစ်စေ တောင်းဆိုလာလျှင် ဖော်ပြရမည်ဟု သတ်မှတ်ထားသည်။ ဥပဒေကို ဖောက်ဖျက်မှုအတွက် နစ်နာကြေး ဒေါ်လာ ၅၀၀ သို့မဟုတ် အမှန်တကယ် နစ်နာကြေးငွေ နှင့် ရှေ့နေအကျိုးဆောင်ခ ပေးဆောင်ရန် သတ်မှတ် ထားရှိ သည်။
Nevada (နီဗာဒါ) ၏ ပြင်ဆင်ထားသည့် ဥပဒေပြု အာဏာပိုင်အဖွဲ့က ပြဋ္ဌာန်းသည့် ဥပဒေ § ၂၀၅.၄၉၈ - ထပ်ပေါင်း၍၊ California (ကယ်လီဖိုးနီးယား) နှင့် Utah (ယူးတား) ဥပဒေများ အရ၊ အွန်လိုင်းစီးပွားရေး လုပ်ငန်းများကို အတိအကျ ရည်ညွှန်းမထားသော်လည်း၊ ငွေရေး ကြေးရေး အရ မဟုတ်သော စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ အားလုံးတွင် လုပ်ငန်းမှ မျှဝေမည် ဖြစ် သော သို့မဟုတ် အခြားသူတစ်ဦးအား တိုက်ရိုက်ရောင်းချမည် ရည်ရွယ်၍လည်းကောင်း သို့မဟုတ် ပေးလျော်ရန် အတွက်လည်းကောင်း သုံးစွဲမည့် မိမိ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ပုံစံတို့ကို အသုံးပြုသူများအား စာရေးသား၍ သို့မဟုတ် အီးမေး(လ်)နှင့်ဖြစ်စေ ဖော်ပြရမည် ဟုဆို သည်။ California (ကယ်လီဖိုးနီးယား)၏ ဥပဒေတွင် အသုံးပြုသူများအား မိမိ၏ သတင်း အချက်အလက်များ နှင့်ပတ်သက်၍ မည်သည့် အကြောင်းကြောင်းကြောင့်မှ မျှဝေခွင့် မပြု သည့် အခွင့်အရေးကို ရွေးချယ်ခွင့်ပေးသော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့် ပတ်သက်သည့် ဖော်ပြချက်မျိုးကို စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတို့မှ ဖော်ပြပေးရသည်။ထို့ပြင် ဝက်(ဘ်)ဆိုဒ်များ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ မူဝါဒတို့နှင့် ပတ်သက်သော အလုပ်သမားများ နှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ အတွက် ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်များလည်း ရှိသည်။
Califirnia နဲ့ Utah ဥပဒေများမှာ toon line စီးပွားရေး ဖြစ်ပွားရေးအတွက် မဟုတ်သော်လည်း စာ(သို့) Email ကို အသုံးပြုနေကြတဲ့ သုံးစွဲသူများ လျှော့နည်းမသွားရန် စီမံခန့်ခွဲခြင်းမဟုတ်တဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အကုန်လုံးကို လိုအပ်နေပါတယ်။ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် ဖြည့်ရသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများက တိုက်ရိုက်ဈေးကွက်စီးပွားရေး စနစ်ရဲ့ သုံးပုံတပုံရောင်းခြင်း ရှယ်ယာလုပ်ခြင်းများ ဖြစ်ပါတယ်။ ကယ်လီဖိုးနီးယား ဥပဒေအရ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများက ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များက သုံးစွဲသူများကို သတင်းအချက်အလက်များဝေငှရန် (သို့) ရွေးချယ်ရန် အခွင့်အရေးများ ပေးပါတယ်။
Califirnia (Calf.Bus.& Prof.Code 22575-22578) Internet Website (သို့) online ဝန်ဆောင်မှုကို မြင်သာအောင် ထားရှိတဲ့ ကယ်လီဖိုးနီးယား ရဲ့ Online Privacy Production Act က Califirnia မှ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို စုဆောင်းသူလို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ စီမံသူတစ်ဦးကို အလိုရှိနေပါတယ်။ Website ပေါ်က ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ တွေဟာ လိုအပ်ချက်များ ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စီမံသူက Website (သို့) online service ကို ဝင်ကြည့်ပြီး သုံးနေကြတဲ့သူ တစ်ယောက်ချင်းရဲ့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် များကို စုဆောင်းပြီး ဝေငှပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Connecticut ( Conn.Gen Stat. 42-471) က ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကာကွယ်ပေးတဲ့ မူဝါဒစီးပွားရေးမှာ လူမှုလုံခြုံရေး နံပါတ်များစုဆောင်းပေးတဲ့ မည်သူ့ကိုမဆို လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီမူဝါဒတွင် (၁) လုံခြုံရေးနံပါတ်များကို ယုံကြည်စိတ်ချရရန် (၂) လုံခြုံရေးနံပါတ်များ တရားမဝင်စွာ ရယူခြင်းမှ တားမြစ်ရန် (၃) လုံခြုံရေးနံပါတ်အလွယ်တကူရရှိနိုင်မှုကို ကန့်သတ်ခြင်းတို့ ပါဝင်ပါတယ်။ Nebraska (Nebraska stat. 87-302(14) Nebraska က ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ မှားယွင်းနေခြင်း ၊ မတိကျဝေဝါးခြင်းများကို လက်မခံပါ။ Nebraska က အချက်တွေကို ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်းများကို အဖွဲ့ဝင်များက ကိုယ်ရေးသတင်းများကို ထိန်းသိမ်းအသုံးပြုခြင်းအတွက် ပြုလုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Pennsylvania (18 Pa.C.S.A 4107(a)(10) ) Pennsylvania တွင် Website မှာတင်ထားတဲ့ (သို့) ဖြန့်ဖြူးထားတဲ့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒဟာ စီးပွားရေးစနစ်ရဲ့ ဦးဆောင်မှားယွင်းမှုများ ပါဝင်နေပါတယ်။
ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒများကို ဖန်တီးရန် အစိုးရ Website များကို လိုအပ်နေတဲ့ ပြည်နယ်အနည်းဆုံး ၁၆ခု ရှိပါတယ်။ Arizona , Askansas , California , Colorado , Delaware , Lowa , Lllinois , Maine , Maryland , Michigan , Minnesota , Montana , New York , Sourth Carolina , Texas , Utah နဲ့ Virgina တို့ပါဝင်ပါတယ်။
အင်တာနက်ဆိုင်ရာ ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေး၏ အန္တရာယ်များ[ပြင်ဆင်ရန်]
ယနေ့ နည်းပညာကမ္ဘာထဲတွင် သန်းချီသော လူအများမှာ ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာ ခြိမ်း ခြောက်မှုများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။ မိမိအနေနှင့် online တွင် မည်သည်ကို ကြည့်ရှုသည် ကို စောင့်ကြည့်ရန်တင်မကဘဲ မိမိ၏သတင်းအချက်အလက်များကို ခိုးယူရန်နှင့် မိမိကြည့်ရှု ခဲ့သည့် မှတ်တမ်းပေါ်တွင် မူတည်၍ ကြော်ငြာများပို့ရန် အတွက်ပါ ကုမ္မဏီများကို ငှားရမ်းလာ ကြသည်။ လူများသည် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်facebook တွင် သုံးစွဲခွင့်အကောင့်များဖွင့်လှစ်၍ Website အများအပြားထံသို့ ဘဏ်နှင့် အကြွေးဝယ်ခွင့်ကဒ် သတင်းအချက်အလက်များကို ရိုက်သွင်းကြသည်။
အင်တာနက်ဆိုင်ရာ ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးကို စဉ်းစားသူများအနေနှင့် ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေး အန္တရာယ်များ ဖြစ်သည့် အင်တာနက် အသုံးပြုခြင်းမှ ရရှိနိုင်သော အခွင့်အရေး အထိခိုက်ခံ ရနိုင်သော အချက်များကို သတိပြုကြသည်။ ထိခိုက်ခံရနိုင်သော နည်းလမ်းများမှာ အသုံးပြု သူ၏ သတင်းအချက်အလက်များကို စုစည်းခြင်းမှနေ၍ spyware များ ဖြန့်ဖြူးခြင်း ဟူသည့် ပိုမိုနှောင့်ယှက် ဒုက္ခပေးသော လုပ်ဆောင်မှုများနှင့် Software အမှားတက်သည့် ပုံစံမျိုးစုံနှင့် ဖျက်စီးခြင်းတို့အထိ နည်းလမ်းမျိုးစုံရှိသည်။ ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်မှု အခွင့်အရေးများကို လူမှုကွန်ယက်ဆိုဒ် အများအပြားတွင် ဖော်ပြထား လေ့ ရှိပြီး အသုံးပြုသူတို့၏ သတင်းအချက်အလက် လုံခြုံမှုများကို အကာအကွယ်ပေးရန် ကြိုးစား ဆောင်ရွက်နေကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့် facebook တွင် ဝင်ရောက်သုံးစွဲသူတိုင်း အတွက် ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်မှု အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ဆက်တင်များ ရရှိနိုင်သည်။ ၎င်းတို့တွင် သင်၏ ဖော်ပြမှုတို့ကို သင်မကြည့်စေလိုသော သူအချို့တို့ ကြည့်ရှုခြင်းမှ တားမြစ်ခြင်း၊ သင်၏ "မိတ်ဆွေများ" အားရွေးချယ်နိုင်ခြင်း၊ သင်၏ဓာတ်ပုံနှင့်ဗွီဒီယိုများအား ကြည့်ရှုခွင့်ရနိုင်သူတို့အား ကန့်သတ် နိုင်ခြင်း တို့ ပါရှိသည်။ ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ဆက်တင်များသည် အခြားလူမှု ဆက်သွယ်ရေး ကွန်ယက် ဆိုဒ်များဖြစ်သော E-harmony နှင့် MySpace တို့တွင်လည်း ရရှိနိုင်သည်။ ၎င်းကဲ့သို့ မိမိကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ အင်တာနက်ပေါ်တွင် ထားရှိသည့်အခါ ထိုသို့ဆက်တင်များ ထားရှိခြင်းသည် အသုံးပြုသူ၏ အခွင့်အာဏာ ပင်ဖြစ်သည်။၂၀၀၇ နှောင်းပိုင်းမှာ facebook က Beacon program ကို စတင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီ program မှာသုံးစွဲသူများရဲ့ ပေးပို့လာတဲ့ သတင်းများကို လူထုအတွင်း လျှော့ချခဲ့ပါတယ်။ လူတော်တော်များများကို ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ၊ Lane v. Facebook, Inc စသည်ဖြင့် ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ပါတယ်။
HTTP cookie များ[ပြင်ဆင်ရန်]
HTTP ဆိုင်ရာ အင်တာနက်အတွင်း ကျန်ရှိနိုင်သော ဖိုင်ငယ်များဖြစ်သည့် HTTP cookie ဆိုသည်မှာ အသုံးပြုသူ၏ ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် website နှင့် website ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ သို့မဟုတ် ရှုပ်ထွေးသော website များတွင် လိုအပ်သည့်အခြား ဖော်ပြထားသော သတင်းအချက်အလက်များ အလိုအလျောက် သုံးစွဲခွင့်ကို ကူညီပေးသည့် အချက်အလက်စုဆောင်းပေးမှု ဖြစ်သည်။ ၎င်း cookie တစ်ခု အတွင်းတွင် သုံးစွဲခဲ့မှု မှတ်တမ်း အချက်အလက်ကို အထူးသိမ်းဆည်းခြင်းဖြင့် သုံးစွဲသူအား ခြေရာခံရာတွင်လည်း သုံးနိုင်သည်။ cookie များသည် ကိုယ်ပိုင် အခွင့်အရေး နယ်ပယ်တွင် အထူး သတိပြုရမည့် အရာများဖြစ်သည်။
အကျိုးဆက်အနေနှင့် အချို့သော cookie ပုံစံများကို ခြေရာခံသည့် cookie ဟု အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ Website တည်ဆောက်ရေးသားသူများမှ cookie ကို တရားဝင်သော နည်းပညာဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် အများဆုံး အသုံးပြုသော်လည်း အလွဲသုံးမှုကိစ္စများ ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသည်။ ၂၀၀၉ တွင် လေ့လာရှာဖွေသူ နှစ်ဦး မှသတိပြုမိသည်မှာ လူမှုဆက်သွယ်မှု ကွန်ရက်များတွင်သုံးသော ဖော်ပြချက်များသည် ကြည့်ရှုလေ့ရှိသော အလေ့အထများနှင့် ချိတ်ဆက်ခွင့်ကို ပြုထားခြင်းဖြင့် ထိုလူမှုဆက်သွယ်မှု ဖော်ပြချက်များသည် cookie များနှင့် ချိတ်ဆက်မှုပြုထားခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်ဟု ဆိုသည်။စနစ်များမှာ ယေဘုယျအားဖြင့် အသုံးပြုသူအား cookie သိမ်းဆည်းမှုကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သတိထားမိအောင် ပြုလုပ်ခြင်းမရှိပေ။ (အချို့သော အသုံးပြုသူများမှ ၎င်းကို ကန့်ကွက်သော်လည်း အင်တာနက်ဆိုင်ရာ ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးနှင့် မှန်ကန်စွာ ဆက်နွယ်ခြင်းမရှိပေ။) သို့သော်လည်း သွယ်ဝိုက်သောအားဖြင့် ကွန်ပျူတာ ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးနှင့် ကွန်ပျူတာ မှုခင်းပညာတွင် သီးသန့် ပါဝင်နေသည်။
Cookie ကို မူရင်းရေးသားသူတို့မှ စိတ်ကူးသည်မှာ website များမှ သိမ်းထားသော cookie ကို အသုံးပြု၍ အသုံးပြုသူများအနေနှင့် ထို website များကို ပြန်လည် ခေါ်ယူနိုင် ရန်ဖြစ်သည်။ ထိုနည်းဖြင့် website မှ ရှိပြီးဖြစ်သောမိမိတို့၏ သတင်းအချက်အလက်များ ကိုသာ ရယူနိုင်သည်။ သို့သော်လည်း လက်တွေ့တွင် program ရေးသူများက ထိုထိန်းချုပ်ကန့် သတ်မှုတို့ကို ရှောင်ကြဉ်နိုင်ခဲ့သည်။ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော အကျိုးဆက်တို့မှာ-
မိမိ မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ကို သက်သေခံမှုကို browser အတွင်း ထားရှိ၍ web ပေါ်တွင် ဖော်ပြခြင်းကိုပြုလုပ်ရန် (အောက်တွင် ကြည့်ရှုရန်)၊ သို့မဟုတ်၊
ဆန့်ကျင်ဘက် နေရာယူရေးသားခြင်း ကိုသုံးစွဲ၍ သို့မဟုတ် အခြားသော နည်းလမ်း များကို သုံးစွဲ၍ အသုံးပြုသူ၏ cookie မှ သတင်းအချက်အလက်များကို ခိုးယူရန်။
အချို့သုံးစွဲသူများက သူတို့၏ web browser များတွင် cookie အသုံးမပြုရန် ရွေး ချယ်ထားကြောင်း - ၂၀၀၀ Pew ဆန်းစစ်လေ့လာချက် ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုများမှ ၄% သော အသုံးပြုသူများရှိကြောင်း သိရသည်။ ထိုသို့ ပြုလုပ်ထားလျှင် အလားအလာရှိသော ကိုယ်ပိုင် အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အန္တရာယ်များကို ဖယ်ရှားပြီးသားဖြစ်သော်လည်း website များ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို ဆိုးရွားစွာ ကန့်သတ်ခြင်းမျိုး ဖြစ်နိုင်သည်။ အားလုံးသော web browser များတွင် နဂိုကတည်းက ထိုသို့ ပြုလုပ်နိုင်မှု စွမ်းရည်ပါရှိပြီး အခြား ပြင်ပ program တစ်ခု မလိုအပ်ချေ။ အခြားတစ်နည်းအနေနှင့် အသုံးပြုသူသည် သိမ်းဆည်း ထားသော cookie များကို မကြာခဏဖျက်ပစ်ခြင်း ပြုနိုင်သည်။ အချို့သော browser များ ( Mozilla Firefox နှင့် Opera ကဲ့သို့သော) မှာ cookie များကို ရှင်းလင်းပစ်ရန် browser ကို ပိတ်သည့်အခါတိုင်း အလိုအလျောက် မေးမြန်း တောင်းဆိုပါသည်။ တတိယအချက်မှာ ပုံမှန်အားဖြင့် cookie များကို ခွင့်ပြု၍ ၎င်းတို့၏ ဖျက်ဆီးမှုကို ကာကွယ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ cookie များကို လမ်းကြောင်းလွဲ၍ သိမ်းဆည်းထား သော အချက်အလက်များကို အခြားတစ်နေရာတွင် ထားရှိသည့် လုပ်ဆောင်ချက်ပြုသည့် သိမ်းဆည်းလက်ခံရာ နေရာမျိုးလည်း ရှိပါသည်။
ဖော်ပြခြင်း ဖြစ်စဉ် ("ခြေရာခံခြင်း" ဟုလည်းသိကြ) သည် များစွာသော အဖြစ်အပျက်များကို အတူစုပေါင်း၍ သေချာစွာစစ်ဆေးပြီး (ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော အရာတစ်ခုခြင်းမှ တစ်ခုခု ထင်ထင် ရှားရှားဖြစ်ပေါ်လာစေခြင်း) တစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်ပေါ်လာမှုနှင့် ပတ်သက်သော သတင်းအချက် အလက် ရရှိရန် (အထူးသဖြင့် ဖြစ်ပေါ်ပုံ ဖြစ်စဉ်များ) ဖြစ်သည်။ အချို့သော အဖွဲ့အစည်းများမှ သူတစ်ပါး၏ web ကြည့်ရှုမှုကို ကြည့်ရှုခဲ့သော ဆိုဒ်များ၏ လိပ်စာ URL များ ကို စုစည်းခြင်းဖြင့် ခြေရာခံ ဆောင်ရွက်ကြသည်။ ရရှိလာသော ခြေရာခံမှုသည် web ကြည့်ရှုသူ မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ကို ဖော်ထုတ်နိုင်သော သတင်းအချက်အလက်များ နှင့် ချိတ်ဆက်မှုပြုနိုင်သည့် အလားအလာဖြစ်သည်။အချို့ web ကို မှီခိုသော ဈေးကွက်ရှာဖွေမှု အဖွဲ့အစည်းများသည် ထိုပြုလုပ်ချက်များကို တရားဝင်ပြုနေကြသည်။
ဥပမာ 'ပုံမှန်အင်တာနက်သုံးစွဲသူ' ၏ ပုံစံကိုတည်ဆောက်ရန် အတွက်၊ ထိုပုံစံသည် လက်တွေ့သုံးစွဲသူ တစ်ဦးချင်းစီထက် အင်တာနက်သုံးစွဲသူအများစု၏ ပျမ်းမျှ အမျိုးအစားဖြစ်သဖြင့် ဈေးကွက် စစ်တမ်း များအတွက် အသုံးတည့်ကြောင်း ဖော်ပြ သည်။ ထိုစုဆောင်းထားသောအချက်များမှာ ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွင် မပါဝင် သော်လည်း၊ အချို့သော သူများမှာ တစ်ဦးခြင်းစီအတွက် ပုံစံဖော်ပြခြင်းသည် ချိုးဖောက်မှု ပါဝင်ကြောင်း ယုံကြည်ကြသည်။ ပုံစံပြုဖော်ပြခြင်းသည် အချက်အလက်များသည် လူတစ်ဦးချင်းစီနှင့် တိုက်ဆိုင်၍ မည်သူမည် ဝါဖြစ်သည်ဟု ဖော်ပြနိုင်သော သတင်းအချက်များ ပါဝင်လာသောအခါ အငြင်းပွားဖွယ်ရာ ကိစ္စရပ်တစ်ခု ဖြစ်လာသည်။အစိုးရနှင့် အဖွဲ့အစည်းများအနေနှင့် honeypot ကဲ့သို့သော ထောင်ဖမ်းနိုင်သည့် website များကို အငြင်းပွားစဖွယ် အကြောင်းအရာများ ထည့်သွင်း၍ တည်ထောင်လာ ကြသည်။ ယင်းမှာ ဂရုမထားသောသူများကို စွဲဆောင်ခြင်းနှင့် ခြေရာခံခြင်းတို့အတွက် ရည်ရွယ်သည်။ ၎င်းသည် တစ်ဦးချင်းစီအတွက် အန္တရာယ်ရှိနိုင်သော အချက်များ ပါဝင်သည်။
ရုတ်တရက်ရရှိသော အင်တာနက်အတွင်း ကျန်ရှိနိုင်သော ဖိုင်ငယ်များ(Flash cookies)[ပြင်ဆင်ရန်]
ရုတ်တရက်ရရှိသော အင်တာနက်အတွင်းကျန်ရှိနိုင်သည့် ဖိုင်ငယ်များ ( flash cookie ) သည် တစ်နေရာတွင်း မျှဝေသော အရာများ ဟုလည်း ခေါ်ဆို၍ ပုံမှန် cookie များ နှင့် အလုပ်လုပ်ပုံ ပုံစံခြင်း အတူတူပင်ဖြစ်ပြီး Adobe Flash Player ကိုသုံး၍ အသုံးပြုသူ၏ ကွန်ပျူတာတွင် သတင်းအချက်အလက်များကို ထားသည်။ ၎င်းတို့မှလည်း အလားတူ ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေး ပျက်စီးမှုအန္တရာယ်များ ရရှိနိုင်သော်လည်း လွယ်ကူ စွာ ပိတ်ဆို့၍မရပေ။ အကြောင်းမှာ browser အများစုတွင် ပါဝင်သော cookie လက်မခံ ရန်ရွေးချယ်နိုင်သည့်အချက်မှာ ထို flash cookie များကို အကျိုးသက်ရောက်မှု မရှိခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ကို ကြည့်ရှုထိန်းချုပ်နိုင်သော နည်းတစ်မျိုးမှာ browser များကို ချဲ့ထွင်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
Wikimania (ဝီကီမင်နာ) တွင် တင်ထားသော 'ဓာတ်ပုံကန့်ကွက်မှု' ကြော်ငြာ
ယနေ့ခေတ်တွင် လူအတော်များများ၌ ဒစ်ဂျစ်တယ် ဓာတ်ပုံကင်မရာများ ရှိပြီး သူတို့၏ ဓာတ်ပုံများကို online တွင် တင်လေ့ရှိကြသည်။ ထိုဓာတ်ပုံများတွင် ဖော်ပြခံရသောသူတို့မှာ အင်တာနက် ပေါ်တွင် အတင်ခံရခြင်းကို မလိုလားသူတို့လည်း ပါဝင်သည်။ အချို့သော အဖွဲ့အစည်းများမှာ ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်ပြီး တုံ့ပြန်မှု များဆောင်ရွက်ရန် ကြိုးပမ်းလာကြသည်။ ဥပမာ ၂၀၀၅ Wikimania အစည်း အဝေးတွင် ဓာတ်ပုံဆရာများသည် ၎င်းတို့၏ပုံများတွင် ပါဝင်သောသူများ၏ ခွင့်ပြုချက်ကို ဦးစွာတောင်းခံမှု လိုအပ်သည်ဟူသော အချက်များ ပါဝင်လာသည်။ အချို့သော သူများမှာ ဓာတ်ပုံကို ကန့်ကွက်သည့် ကြော်ငြာများတင်၍ သူတို့၏ပုံများရိုက်ကူးခံရခြင်းကို လက်မခံ နိုင်ကြောင်း ပြသကြသည်။
အင်တာနက်အသုံးပြုသူများသည် အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ ISP ဆီမှ အင်တာနက် သုံးစွဲခွင့်ကို ရရှိကြသည်။ အသုံးပြုနေကြသူများအကြား သတင်းအချက်အလက် များစီးဆင်းမှုမှာ ထို ISP များကို ဖြတ်သန်းလာကြသည်။ သို့ဖြစ်ရာ ISP တို့ အနေနှင့် အသုံးပြုသူတို့၏ အင်တာနက်ပေါ်တွင် လုပ်ဆောင်မှုများကို စောင့်ကြည့်ရှုနေ သည့် ဖြစ်နိုင်ခြေများ ရှိပါသည်။သို့သော်လည်း၊ ISP တို့မှာ ထိုသို့သော လုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင် ပါဝင်ပတ် သက်နေခြင်းမှ တရားဥပဒေအရ၊ ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းများအရ၊ စီးပွားရေးရာ သို့မဟုတ် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အကြောင်းပြချက်တို့နှင့် ကာကွယ်ထားပါသည်။
ထိုတရားဥပဒေ နှင့် လူ့ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ ရှိသော်လည်း အချို့သော ISP ဖြစ်သည့် ဗြိတိသျှ Telecom (BT) မှ Phorm ကဲ့သို့သော ကုမ္ပဏီမှ ပေးသည့် သတင်းအချက်အလက်များ အတွင်းကျကျ စူးစမ်းဖော်ထုတ်ခြင်း နည်းပညာကို အသုံးပြု၍ သုံးစွဲသူများ ကြည့်ရှုသွားသည့် စာမျက်နှာများ၏ ပါဝင်မှုတို့ကို စစ်ဆေးရန် စီစဉ် နေကြသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် လူတစ်ယောက်၏ web ကြည့်ရှုမှု အလေ့အထ မှတ်တမ်းကိုတည်ဆောက်၍ ကြော်ငြာသူများကို ထိရောက်သော ကြော်ငြာဦးတည်မှု ပြုလုပ်ရန် ရောင်းချခြင်း တို့ကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။ BT ၏ ထိုကြိုးပမ်းချက်မှာ အကျိုးရှိသော 'web လုပ်ငန်း' ဟူ သောအမည်အောက်တွင် ရောင်းချခြင်းပြုပါသည်။
ပုံမှန်အားဖြင့် ISP တို့သည် သူတို့၏ ဝန်ဆောင်မှုကို သုံးစွဲသူတို့၏ အချို့သော သတင်းအချက်အလက်များကို စုစည်းထားလေ့ရှိပါသည်။ ကိုယ်ပိုင် အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာ ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် ISP တို့မှာ သတင်းအချက်အလက်များကို ၎င်းတို့ အင်တာနက် ဆက်သွယ်မှု ပေးဆောင်ရန်အတွက် လိုအပ်သမျှ နည်းနိုင်သမျှ အနည်းဆုံး ပမာဏခန့်သာ စုဆောင်းလေ့ရှိသည်။ (IP လိပ်စာ၊ သက်ဆိုင်သော ပြေစာတောင်းရန် သတင်းအချက်အလက် စသည်)။
ISP မှ မည်သည့် သတင်းအချက်အလက်ကို စုဆောင်းသည်၊ ထိုအချက်အလက် နှင့် ဘာလုပ်သည်နှင့် သူ၏စားသုံးသူများကို အသိပေးမှုပြုသည်၊ မပြုသည်တို့သည် ကိုယ်ပိုင် အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအတွက် အရေးပါသော မေးခွန်း ထုတ်ဖွယ်ရာများ ဖြစ်လာ သည်။ ထိုစုဆောင်းထားသော မိမိတို့၏ သတင်းအချက်အလက်များကို သုံးစွဲခြင်းအပြင် ISP မှဖော်ပြထားသည်မှာ အစိုးရဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တို့မှ တောင်းဆိုလာခဲ့လျှင်လည်း ထိုစုဆောင်းထားသော သတင်းအချက်အလက်များကို ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆိုပါ သည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နှင့် အခြားသောနိုင်ငံများတွင် ထိုတောင်းဆိုမှုမျိုး အတွက် ၀ရမ်း မလိုအပ်ပါချေ။
ISP တစ်ခုအနေနှင့် ကောင်းမွန်စွာ code ထည့်သွင်းထားသော သတင်းအချက်အ လက်များ ၎င်း၏ စားသုံးသူများနှင့် အင်တာနက်အကြား ဖြတ်သန်းနေမှုကို မသိနိုင်ပေ။ Web လမ်းကြောင်းများကို code ထည့်သွင်းသုံးစွဲခြင်းအတွက် HTTP လုံခြုံမှု သည် လူသိအများဆုံးနှင့် ထောက်ပံ့မှုအပေးနိုင်ဆုံး စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ အသုံးပြုသူမှ အချက် အလက်များကို code ထည့်သွင်းလျှင်ပင် ISP မှ ပေးပို့သူနှင့် လက်ခံသူတို့၏ IP လိပ်စာများကို သိနေနိုင်သေးသည်။ (သို့သော်လည်း ပြဿနာများကို ပြင်ဆင်မှု မပြု လုပ်ဘဲ ကျော်လွှားခြင်းကို IP လိပ်စာများ အပိုင်းကိုကြည့်ပါ)
မိမိ မည်သူမှန်းမသိအောင် ပြုလုပ်ပေးသည့် software ဖြစ်သော I2P-အမည်မသိ ကွန်ရက် သို့မဟုတ် Tor တို့ကိုသုံးစွဲ၍ မိမိ၏ IP လိပ်စာနှင့် မိမိ မည်သည့် ဝန်ဆောင်မှုများ သုံးစွဲရရှိနေသည်ကို ISP များ မသိစေဘဲ web ဝန်ဆောင်မှု များ ရရှိအောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ အင်တာနက်အသုံးပြုသူ ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးနှင့် ပတ်သက်သော ယေဘုယျ အရေးကိစ္စများသည် ကုလသမဂ္ဂ အေဂျင်စီတစ်ခုအတွက် မိမိမည်သူဖြစ်သည်ဟုလိမ်လည်မှု အန္တရာယ်များအကြောင်း အစီရင်ခံစာတစ်ခု ထုတ်ပြန်ရန် လုံလောက်သော အကြောင်းတစ်ခု ဖြစ်လာသည်။
ပရိုဂရမ်များနှင့် လည်ပတ်မှုစနစ်များမှာ သုံးစွဲမှုတို့၏ သတင်း အချက်အလက် မှတ်တမ်းတင် ခြင်း များဆောင်ရွက်ရန် ပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းတွင် ကွန်ပျူတာသုံးစွဲမှု ပြုနေစဉ် အချိန်ကို မှတ်သားထားခြင်း သို့မဟုတ် မည်သည့် ဝက်(ဘ်)ဆိုဒ်များ ကြည့်ရှုသည်ကို မှတ်သားထားခြင်းများ ပါဝင်နိုင်သည်။ အခြားပြင်ပမှ တစ်စုံတစ်ယောက်မှာ ကွန်ပျူတာကို တရားဝင်ဖြစ်စေ၊ တရားမဝင်ဖြစ်စေ ထိန်းချုပ်ခွင့် ရရှိသည်ဆိုလျှင် သုံးစွဲသူ၏ ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးကို ဖောက်ဖျက်စေ နိုင်သည်။ ၎င်းကို မှတ်တမ်းကူးယူခြင်း မပြုလုပ်စေခြင်းဖြင့် သို့မဟုတ် မှတ်တမ်းများကို မှန်မှန် ရှင်းပစ်ခြင်းဖြင့် ရှောင်ရှားနိုင်သည်။
ဥပဒေဘက်မှ ခြိမ်းခြောက်မှု အန္တရာယ်များ[ပြင်ဆင်ရန်]
အင်တာနက်သုံးသူတို့၏ သတင်းအချက်အလက်များကို ခြေရာခံရန်နှင့် စုစည်းရန် ပြုလုပ်တည်ဆောက်ထားသော အစိုးရအေဂျင်စီတို့၏ နည်းပညာကို အသုံးချသုံးစွဲမှုတို့သည် ကိုယ်ပိုင် အ ခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ထောက်ခံအားပေးသူများ၊ အရပ်သား လွတ်လပ်ခွင့်လိုလားသူများ နှင့် လျင်မြန်စွာ ပြောင်းလဲနေသော ဆက်သွယ်မှုဆိုင်ရာ နည်းပညာများတွင် ငြိမ်းချမ်းရေးကို ထိန်းသိမ်းရန် အတွက် ထိုအချက်များကို ဥပဒေအရ ဖိအားပေးရန်လိုအပ်သည်ဟု ယုံကြည်ကြသူများ အကြား တွင် အငြင်းပွားစရာ ခေါင်းစဉ်တစ်ခု ဖြစ်လာသည်။
တိကျသော ဥပမာများ၂၀၀၉ ဇန်နဝါရီတွင် Brussels (ဘရပ်(စ်) ဆယ်(စ်)) ရှိ ဥရောပသမဂ္ဂ ကောင်စီ ၏ ဝန်ကြီးများ ဆုံးဖြတ်ချက်အရ ယူကေ၏ ပြည်ထဲရေးရုံးမှ ရဲသားတို့ အနေနှင့် လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ ကွန်ပျူတာတွင် ပါရှိသည့်အရာများကို ၀ရမ်းမပါဘဲ ရယူရန် ခွင့်ပြုသည့် အစီအစဉ်ကို လက်ခံကျင့်သုံးခဲ့သည်။ ထိုဖြစ်စဉ်ကို "အဝေးမှ ရှာဖွေခြင်း" ဟုခေါ်ပြီး အဝေးတစ်နေရာရှိ တစ်စုံတစ်ယောက်အား အခြားတစ်ယောက်၏ ဟာဒ့်ဒစ် နှင့် အီးမေး(လ်)၊ သွားလာကြည့်ရှုခဲ့သော မှတ်တမ်းနှင့် ဝက်(ဘ်) ဆိုဒ်များ အပါအဝင် အင်တာနက်သုံးစွဲမှုများကို စစ်ဆေးကြည့်ရှုခွင့် ပြုခြင်းဖြစ်သည်။
အီးယူတွင် ရှိသော ရဲသားများမှာ ယခုအခါ ဗြိတိသျှ ရဲသားတို့ကိုယ်စား အဝေးမှရှာဖွေ ခြင်း ဆောင်ရွက်မှုကို တောင်းဆိုရန် ခွင့်ပြုလိုက်ပြီ ဖြစ်သည်။ အထက်အရာရှိတစ်ဦးသည် ဆိုးရွားသော ဒုစရိုက်မှုတစ်ခုကို ကာကွယ်ရန် လိုအပ်သည်ဟု ယုံကြည်ပါက ရှာဖွေမှုကို ခွင့်ပြုနိုင်ပြီး ကောက်ယူ ရရှိသော ပစ္စည်းများကို သိမ်းဆည်း၍ သက်သေအထောက်အထားအဖြစ် အသုံးပြုသည်။ အတိုက်အခံ လွှတ်တော်အမတ်များနှင့် အရပ်သား လွတ်လပ်ခွင့် လိုလားသူများက ဤသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည် ကျယ်ပြန့်သော စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့် ကိုယ်ပိုင် အခွင့်အရေး ပေါ်တွင် ထိခိုက်မှု ဖြစ်နိုင်ခြေများဆီသို့ ဦးတည်နေပြီဖြစ်ကြောင်း သတိပြုလာကြသည်။ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာလွတ်လပ်မှု ဒါရိုက်တာ Shami Chakrabarti (ဆဟာမီ ချကရာ ဘာတီ) မှဆိုသည်မှာ “ပြည်သူလူထုအနေနှင့် ၎င်းကို ဥပဒေအသစ် တစ်ရပ် ပြုလုပ်ခြင်း နှင့် တရားရေး ခွင့်ပြုမိန့် ပြုလုပ်ခြင်းတို့ဖြင့် ထိန်းချုပ်မှုပြုရန် လိုလားနေကြသည်။ ထိုကာကွယ်မှုများ မရှိဘဲနှင့် ပြုလုပ်ခြင်းမှာ ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးကို ချိုးဖောက် ဖျက်ဆီး ခြင်း သင်္ကေတပင် ဖြစ်သည်” ဟုဆိုသည်။
FBI ၏ မှော်မီးအိမ် အမည်ရ software မှာ ၂၀၀၁ နိုဝင်ဘာလ တွင် လူထုအတွင်းသိရှိခဲ့ရာမှ အငြင်းပွားစရာ အကြောင်းအရာဖြစ်လာသည်။ မှော်မီးအိမ်သည် လျှို့ဝှက် code အသုံးပြုမှုကို အကျိုးမဲ့ စေလျှက် သုံးစွဲသူ ရိုက်နှိပ်သော စာများကို မှတ်တမ်းကူးသော Trojan Horse Program တစ်မျိုးဖြစ်သည်။
အခြားဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော အင်တာနက် ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေး၏ အန္တရာယ်များ
အနှောင့်အယှက်ပေးသော spyware, malware
ဝက်(ဘ်) ပေါ်မှ ထည့်သွင်းနှောင့်ယှက်မှု (HTML ရရှိထားသော Email)
လူမှု ဆက်သွယ်မှု တည်ဆောက်ရေးများ
အန္တရာယ်ပေးနိုင်သော ကြားခံဆာဗာ (သို့မဟုတ် "မိမိကိုယ်ဖုံးကွယ်ပေးသော" အခြားဝန်ဆောင်မှုများ)
Jason Fortuny နှင့် ဗဟိုချုပ်ကိုင်သော online အစုအဖွဲ့ ကွန်ရက်
၂၀၀၆ စက်တင်ဘာလ အစောပိုင်းတွင် Seattle ဒေသ အလွတ် ဂရပ်ဖစ် ရေးဆွဲ သူနှင့် ကွန်ရက်စီမံခန့်ခွဲသူဖြစ်သော Jason Fortuny သည် ဗဟိုချုပ်ကိုင်သော online အစုအဖွဲ့ ကွန်ရက်ဟူသည့် Seattle ရှိ ထိုဒေသတွင်း အမျိုး သားများနှင့် အပျော်အပါးကိစ္စ ဆောင်ရွက်လိုကြောင်း အမျိုးသမီးအဖြစ် ဟန်ဆောင်၍ ကြော်ငြာ ပေးပို့ခဲ့သည်။ စက်တင်ဘာလ ၄ တွင် သူက wiki website ဖြစ်သော Encyclopædia Dramatica တွင် တုံ့ပြန်မှု ၁၇၈ခုလုံးကို တင်ပြခဲ့သည်။ ၎င်းတို့တွင် ဓာတ်ပုံနှင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက် အသေး စိတ်များ အပြည့်အစုံပါဝင်ပြီး ယင်းမှာ ဗဟိုချုပ်ကိုင်သော online အစုအဖွဲ့ ကွန်ရက်၏ စမ်းသပ်မှုဟုဖော်ပြပြီး ထိုတုံ့ပြန်မှုပြုသူများကို မည်သူဖြစ်ကြောင်း ဖော် ထုတ်ရန် အခြားသူ များကို တိုက်တွန်းခြင်းပြုနိုင်ခဲ့သည်။
အချို့သော online ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်များ ဖော်ပြမှုမှာ မဟုတ်မမှန်ပြုလုပ်ခြင်းကို ဖော်ပြခြင်းအတွက် တရားမျှတသည်ဟု မြင်ရသော်လည်း fortuny ၏ ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထောက်များမှ မည်သို့သော တရားမျှတမှုမျိုးကိုမှ မမြင်ပါဟုဆိုသည်။ Wired မဂ္ဂဇင်း၏ စာရေးဆရာ Ryan Singel က fortuny ကို "လူမှုရေးကိစ္စများကို မုန်းတီးသော စိတ်ရောဂါသည်”ဟု သရုပ်ဖော်ပြီး ဥပဒေ ပါမောက္ခ Jonathan Zittrain က " fortuny ကို ပြန်လည်ဖြေကြားသော သူများသည် မည်သည့် တရားမဝင်မှုကိုမှ ပြုလုပ်ခြင်း မရှိပါ၊ သို့ဖြစ်ရာ မိမိနှစ်သက်ရာအပျော်အပါးကိစ္စကို ဖော်ထုတ်ပြသခြင်းသည် online နှင့် လူ တို့၏ဘဝများကို အနှောင့်အယှက်ပြုနိုင်သည်ဟူသောအချက်မှလွဲ၍ လူ့အသိုင်းအဝိုင်းကို ပျက် စီးစေသည်ဟူသော အချက်ကို မတွေ့ရပါ" ဟုဆိုသည်။
Fortuny သည် ဝါရှင်တန် ပြည်နယ်ဥပဒေအရ တာဝန်ရှိသူ ဖြစ်သော်လည်း ၎င်းမှာ သူဖော်ပြ လိုက်သော သတင်းသည် အများပြည်သူနှင့်သက်ဆိုင်သည်ဟု တရားဝင် သတ်မှတ်ခြင်းခံရ၊ မရပေါ်တွင် မူတည်ကြောင်း အီလက်ထရွန်းနစ် နယ်ပယ်သစ် အဖွဲ့အစည်းမှ ဖော်ပြသည်။ ၎င်းအဖွဲ့၏ အကျိုးဆောင်ကိုယ်စားလှယ်ရှေ့နေ Kurt Opsahl မှ ဆိုသည်မှာ " ကျွန်ုပ်သိရသလောက်ဆိုလျှင် တုံ့ပြန်သူများ သည် အများပြည်သူအကြားထင်ရှားသည့် သူများမဟုတ်သဖြင့် အများပြည်သူနှင့် သက်ဆိုင် သော ကိစ္စဟူ၍ သတ်မှတ်ရန်မှာ စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ပင်ဖြစ်ကြောင်း ဆိုပါသည်။"
Fortuny ၏အဆိုအရ သူ၏ ဗဟိုချုပ်ကိုင်သော online အစုအဖွဲ့ ကွန်ရက် စမ်းသပ်ချက်၏ အကျိုးဆက်အဖြစ် လူနှစ်ယောက်မှာ အလုပ်ပြုတ်သွားပြီး "ကိုယ်ရေးကိုယ် တာ လွတ်လပ်ခွင့်ကို ချိုးဖောက်ခြင်း အဖြစ် Fortuny အား Illinois တရားရုံးတွင် တရားစွဲဆိုမှု ပြုခဲ့သည်။" Illinois ကဲ့သို့သော ခိုင်မာသည့်တရားရုံးချုပ်ရှေ့နေ ရှေ့မှောက်သို့ Fortuny သည် ရောက်ရှိလာခြင်းလည်းမရှိ၊ ရှေးဦး ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ချက်များ ပြုလုပ်ပြီး သော်လည်း ပြန်လည်ဖြေဆိုခြင်းမပြုခဲ့ပေ။ မစ္စတာ Fortuny အား ဆင့်ခေါ် ခြင်းကို ရှောင်ရှားသူအဖြစ် အမှုဖွင့်ခံရသော်လည်း Illinois ၏ cook county ရှိ Circuit တရားရုံးတွင် သူကအမှု ဖွင့်ခဲ့သည်။ ရလဒ်အနေနှင့် တရားရုံးမှ Mr.Fortuny အား ပြုထားပြီးသောပြစ်ဒဏ် ချမှတ်၍ ၂၀၀၉ ဇန်နဝါရီလ ၇ အတွက် နစ်နာမှုလျော်ကြေးပေးစေရန် တရားရုံးတွင် ကြားနာစေသည်။ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ တရားရုံးတွင် ကြားနာရန် ပျက်ကွက်ခြင်း ကြောင့် လျော်ကြေးငွေများအဖြစ် Fortuny သည် ၇၄၂၅၂.၅၆ ဒေါ်လာ အား မူပိုင်ခွင့် ချိုးဖောက်မှုအတွက်၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များအား အများ ရှေ့မှောက်ဖော်ထုတ်ခြင်းအတွက် လျော်ကြေးအဖြစ်၊ ပိုင်နက်ကျူးလွန်ခြင်းနှင့် ရှေ့နေဝန်ဆောင်ခနှင့် ကျသင့်ငွေတို့အတွက် ပေးဆောင်စေရန် အမိန့်ချလိုက်သည်။
ရှာဖွေဝန်ဆောင်မှု ပေးသူတို့၏ သတင်းအချက်အလက်များနှင့် ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းချက်[ပြင်ဆင်ရန်]
Yahoo! နှင့် MSN Microsoft အပါအဝင် အင်တာနက်ကုမ္ပဏီကြီးများထံမှ အချက်အလက်များသည် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုနှင့် တရုတ်ပြည် တို့တွင် တရားရုံးမှဆင့်စာအဖြစ် ခေါ်ဆိုခြင်းပြုနိုင်ကြောင်း သတ်မှတ်ထားပြီးဖြစ်သည်။ AOL သည် သူ၏ online ရှာဖွေဝန်ဆောင်မှုမှ အချက်အလက်အတော် များများကို သတင်းထောက်များအား online လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာ အပြုအမူများကို ခြေရာကောက်ရန် ပေးသုံးထားခဲ့သည်။
၂၀၀၆ တွင် ကြိုးမဲ့မှုကိုနှောင့်ယှက်သူ ဟက်ကာမှ သူ၏ Google ရှာဖွေမှုများသည် သူ့အား ခြေရာခံရန်လမ်းစများ ဖြစ်ခဲ့ကြောင်းဝန်ခံသည်။ ထိုတရားခံသည် Google မှ ကွန်ရက်ပေါ်တွင် " wifi 2.4 Ghz ကို မည်သို့ နှောင့်ယှက်လွှင့်ထုတ်ခြင်း ပြုရမည် နည်း၊" " wifi 2.4 Ghz ကိုနှောင့်ယှက်ခြင်း"နှင့် "ကြိုးမဲ့ကွန်ရက်ကို အနှောင့်အယှက် ပြုနိုင်သော စက်ပစ္စည်းပြုလုပ်ခြင်း" စသည့် ရှာဖွေမှုများကို ထည့်သွင်းရှာဖွေခဲ့သည်။ တရားရုံး မှ စာရွက်စာတမ်းများတွင် FBI အနေနှင့် သူတို့၏ရှာဖွေမှုကို မည်သို့ရရှိသည်ကို ဖော်ပြ မထားသော်လည်း (ဥပမာ- သိမ်းဆည်းရမိသော hardisk မှ သို့မဟုတ် ရှာဖွေရေး ဝန် ဆောင်မှုမှ တိုက်ရိုက်) Google က ဖော်ပြထားသည်မှာ ၎င်းအား အင်တာနက် လိပ်စာ သို့မဟုတ် web cookie ကို ပေးပါက ဥပဒေ အကျိုးပြုရန်အတွက် အကြောင်း အရာများကို ရှာဖွေပေးပို့နိုင်သည် ဖြစ်ကြောင်းဆိုသည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နှင့် Zeigler (ဇယ်ဂျလာ)[ပြင်ဆင်ရန်]
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် အပြစ်ရှိကြောင်း သဘောသက်ရောက်စေသည့် သက်သေအထောက်အထားများကို အလုပ်ခွင်ရှိ ကွန်ပျူတာများတွင် သိမ်းဆည်းထားသူ ပုဂ္ဂလိကဝန်ထမ်း (အစိုးရဝန်ထမ်းမဟုတ်သူ) တစ်ဦးသည် ဥပဒေ စတုတ္ထပြင်ဆင်ချက်တွင်ပါသော ပြစ်မှုဆိုင်ရာ တရားစွဲဆိုရာတွင် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာ စံနှုန်းများ၏ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော မျှော်လင့်ချက်အားဖြင့် အကာအကွယ်ရလျှက် ရှိမရှိကို ဆွေးနွေးမှုများ များစွာရှိသည်။ဥပဒေ ဆုံးဖြတ်ချက် အများစုက ထိုဝန်ထမ်းတွင် သူ၏ အလုပ်နှင့် ပတ်သက်သည့် အီလက်ထရွန်နစ် ဆက်သွယ်ရေးများကို သုံးစွဲလာခဲ့လျှင် ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော မျှော်လင့်ချက် မရှိဟုဆိုသည်။ ဥပမာ - အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နှင့် Simons ၊ 206 F.3d 392 ၊ 398 (စတုတ္ထ စောင်ရေ ၂၀၀၀ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈)။
သို့သော်လည်း federal တရားရုံးတစ်ခုမှ ဆွေးနွေးပြောဆိုသည်မှာ ကုမ္ပဏီ laptop များ၏ ဆက်သွယ်မှုများနှင့် ပတ်သက်ပြီး ရှေ့နေနှင့်အမှုသည် ဆက်ဆံရေး အခွင့်အရေးအရ အလုပ်သမားများသည် ရဲရဲတင်းတင်း ပြောဆိုရဲလာသည်ဟုဆိုသည်။ Curto နှင့် ဆေးဝါးဆိုင်ရာ ကမ္ဘာ့ ကုန်သွယ်မှု နံပါတ် 03CV6327 ၊ 2006 US.Dist.LEXIS 29387 (E.D.N.Y. မေလ ၁၅၊၂၀၀၆)။
ထိုအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်သည့်အခြား ဆွေးနွေးချက်များကို ကြည့်လျှင်၂၀၀၇ ဇန်နဝါရီ လ ၃၀ တွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ Ninth Circuit တရားရုံး နှင့် Ziegler တို့၏ ပြန်လည်ကြားနာစစ်ဆေးရန် အသနားခံစာသည် ၂၀၀၆ ဩဂုတ်လတွင် ချမှတ်ခဲ့သော အစောပိုင်း ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပြန်ပြောင်းသွားစေသည်။ ယခင် ဆုံး ဖြတ်ချက်နှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် တရားရုံးမှ အလုပ်သမားတစ်ဦးသည် သူ၏အလုပ်ကွန်ပျူတာတွင် ကိုယ်ပိုင် လွတ်လပ်မှု အခွင့်အရေးရှိသည် ဟု သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း တရားရုံးမှ အလုပ်ရှင်အနေနှင့် မည်သည့် တရားမဝင် ရှာဖွေမှုနှင့် တိုက်ခိုက်မှုမျိုးမဆိုကို ခွင့်ပြုနိုင်သည် ဟုဆိုသည်။ ရည်ညွှန်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် Ziegler ၊ ___F3d 1077 (၉ကြိမ်မြောက် စောင်ရေ ၂၀၀၇ ဇန်နဝါရီလ ၃၀၊ နံပါတ်. ၀၅-၃၀၁၇၇)။ CF အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် Ziegler ၊ 456F.3d 1138 (၉ကြိမ် မြောက် စောင်ရေ ၂၀၀၆) ကိုကြည့်ပါ။
Ziegler တွင် အလုပ်သမားသည် သူ၏အလုပ်ခွင်မှ ကလေးသူငယ် ညစ်ညမ်း website များကို ကြည့်ရှုခဲ့သည်။ သူ၏အလုပ်ရှင်မှ သူ့လုပ်ဆောင်ချက်များကို သတိပြု မိပြီး hardisk ကို ကူးယူကာ အလုပ်သမား၏ ကွန်ပျူတာကို FBI သို့ ပို့ခဲ့ သည်။ သူ၏ ပြစ်မှုကျူးလွန်မှုစစ်ဆေးခြင်းတွင် Ziegler က တောင်းဆိုသော သက်သေအထောက်အထား ဖုံးကွယ်မှုဖြင့် တရားစွဲဆိုသည် အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အစိုးရသည် သူ၏ စတုတ္ထပြင်ဆင်ချက်ပါ အခွင့်အရေးကို ချိုးဖောက်ခြင်း ကြောင့်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။Ninth Circuit မှ အောက်တရားရုံးကို ကလေးညစ်ညမ်း website များကို သက်သေအထောက်အထားအဖြစ် ပေးအပ်ရန် ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ အထက်တရားရုံးမှ ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးနောက် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ မျှော်လင့်ချက်အဖြစ် ထင်မြင်ယူဆပြီး Ziegler တွင် သူ၏ရုံးနှင့် သူ၏ကွန်ပျူတာ၌ ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော မျှော်လင့်ချက် ရှိသည်ဟု အသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။ တရားရုံးမှဆက်လက်၍ သူ၏ အလုပ်ရှင်အနေနှင့် အစိုးရမှ ကွန်ပျူတာတွင် ရှာဖွေမှုကို ခွင့်ပြုသဘောတူခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ထိုရှာဖွေမှုသည် Ziegler ၏ စတုတ္ထပြင်ဆင်ချက် အခွင့်အရေးကို ထိခိုက်မှုမပြုကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။
ပြည်နယ် နှင့် Reid[ပြင်ဆင်ရန်]
New Jersey ထိပ်တန်းတရားရုံးမှ ကွန်ပျူတာ အသုံးပြုသူများ ကိုယ်ပိုင် လွတ် လပ်မှု အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်ကို ပြည်နယ် နှင့် Reid တို့၏ အရေးကိစ္စနှင့် ပတ် သက်ပြီး တင်ပြခဲ့သည်။ ၎င်းကိစ္စတွင် ကွန်ပျူတာသုံးသူများတွင် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ လွတ်လပ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သူတို့မှ ISP များသို့ ပေးရသော သတင်းအချက်အလက်တို့ နှင့်ပတ်သက်၍ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော မျှော်လင့်ချက်များရှိသင့်သည် ဟုဆိုသည်။ဤကိစ္စရပ်တွင် Shirley Reid မှာ သူမ၏ အလုပ်ရှင်၏ ထောက်ပံ့သူ ကုမ္ပဏီနှင့် ဆက်သွယ်သော online account စကားဝှက်နှင့် ပေးပို့ရန် နေရပ်လိပ်စာကို ပြောင်းလဲမိသဖြင့် ကွန်ပျူတာသူခိုးဟု အဆိုခံရသည်။
ရဲဘက်မှ ISP Comcast အကူအညီဖြင့် သူမအား မည်သူ မည်ဝါဖြစ်ကြောင်း ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး တရားရေးဆောင်ရွက်ချက်တို့နှင့် မသက်ဆိုင်သော စည်ပင်သာယာ ဆင့်ခေါ်စာကို ပေးခဲ့သည်။ Comcast မှ ရရှိသော reid နှင့် ပြစ်မှုကျူးလွန်ကြောင်း အချက်များသို့ ချိတ်ဆက်သော သတင်းအချက်အလက်များကို မသင့်လျော်သော ရှာဖွေမှုနှင့် တိုက်ခိုက်မှုတို့မှ ကာကွယ်ရန် ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်အရအခွင့်အရေးကို ဖျက်ဆီးနှောင့်ယှက်မှုကို ဖော်ပြရာရောက်သဖြင့် အောက်တရားရုံးက ရပ်တန့်စေခဲ့သည်။နယူး ဂျာစီ ထိပ်တန်း တရားရုံးက ပြုလုပ်သည့်အတိုင်း အာဏာရ တရားရုံးက ISP သုံးစွဲသူ မှတ်တမ်းများသည် ဂျူရီအဖွဲ့တို့ ဆင့်ခေါ်စာပေးပို့ရန်အတွက်သာ ဥပဒေအကျိုးပြုရန် ဖြစ်စေသည်ဟူသော ဥပဒေကို အတည်ပြုခဲ့သည်။အကျိုးရလဒ်အနေနှင့် နယူးဂျာစီမှ ဗဟိုတရားရုံးများ ထက်ဦးစားပေးကာ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာလွတ်လပ်မှု အခွင့်အရေးကို ကွန်ပျူတာ သုံးစွဲသူများအား ပေးခဲ့သည်။ဤကိစ္စသည် ဥပဒေအနေနှင့်အလုပ်ခွင်ကွန်ပျူ တာများနှင့်ပတ်သက်သော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမှုများပေါ်တွင် မည်သို့ဆောင်ရွက်သည်ကိုပြသခဲ့ခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
Robbins နှင့် အောက် Merion ဒေသဆိုင်ရာကျောင်း[ပြင်ဆင်ရန်]
Robbins နှင့် အောက် (မီရီအွန်ဒေသဆိုင်ရာ ကျောင်း (အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု Pennsylvania ၏ အရှေ့ပိုင်း ဒေသဆိုင်ရာ ၂၀၁၀ ) တွင် ဖယ်ဒ ရယ် အစိုးရ၏တရားရုံးမှ Philadelphia (ဖီလာဒယ်(လ်)ဖီးယား) ကျေးတောသား အထက်တန်း ကျောင်းသားနှစ်ဦးမှ ကျောင်းသားများ၏ ကိုယ်ပိုင် အခွင့်အရေး လွတ်လပ်မှုကို ဖျက်ဆီးချိုး ဖောက်ခြင်းနှင့် ကျောင်းသားများအိမ်တွင် အသုံးပြုနေသည့် လပ်တော့(ပ်)များတွင် နှစ်မြုပ် တပ်ဆင်ထားသော ကင်မရာများကို ထိန်းချုပ်လှုပ်ရှားစေ၍ ကျောင်းသားများအား တိတ်တဆိတ် ထောက်လှမ်းခြင်းတို့ကို တရားလို ပြုတိုင်ကြားမှုအတွက် ကျောင်းဒိစတြိတ်အား တရားရုံး အမိန့်စာ ကို ချမှတ်လို်က်သည်။ ကျောင်းမှ ၆၆,၀၀၀ အထက်သော ဝက်(ဘ်) ကင်မရာမှ တိတ်တဆိတ် ရိုက်ထားသည့် ကျောင်းသားများ အိပ်ခန်းအတွင်းရိုက်ချက်များ အပါအဝင် ဝက်(ဘ်) မှတ်တမ်းများ နှင့် စကရင်မှတ်တမ်းများကို ရိုက်ကူးထားကြောင်း ဝန်ခံမှု ပြုလိုက် သည်။
ဆရာများ နှင့် MySpace (မိုင် စပေ့)[ပြင်ဆင်ရန်]
ကမ္ဘာအနှံ့တွင် ဆရာများ၏ MySpace ပေါ်ရှိ ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အငြင်းပွားမှုတို့ ပေါ်ပေါက်လာသည်။ Ohio (အိုဟိုင်းယိုး) သတင်းအဖွဲ့ မှ သူတို့အား ကြိုတင်သတိပေးထားခဲ့သည်မှာ သူတို့တွင် MySpace သုံးစွဲမှု ရှိခဲ့လျှင် ဖျက်သိမ်းသင့်ကြောင်း ဆိုသည်။ Eschool သတင်းမှ သတိပေးချက်မှာ “ဆရာတို့အနေနှင့် online တွင် ဘာကိုတင်သည်ကို သတိပြုပေးရန် ဖြစ်သည်။”ONA မှ ဆရာ များအား ထိုသို့သော ဆိုဒ်များကို ဝင်ရောက်ခြင်းမပြုလုပ်သင့်ကြောင်း အကြံပြုစာများ တင်ပို့ ပေးခဲ့သည်။ ဆရာများအနေနှင့် လိုင်စင်ပယ်ဖျက်မှုများ၊ ရာထူးချထားခြင်းများနှင့် အပြစ်ရှိ ကြောင်း ထုချေလွှာတင်ရခြင်းစသည့် အကျိုးဆက်များကို ရင်ဆိုင်ရဖွယ်ရှိသည်။
အဆင့်မြင့် ပညာရေး သမိုင်းမှတ်တမ်း မှ ၂၀၀၇ ဧပြီလ ၂၇ တွင် Stacy Snyder အကြောင်းဖြစ်သည့် " MySpace (မိုင်စပေ့) ဓာတ်ပုံတစ်ပုံသည် ကျောင်းသားတစ်ဦး ၏ သင်ကြားမှုအောင်လက်မှတ်ကို ဆုံးရှုံးစေသည်" အမည်ရသည့် ဆောင်းပါးတစ်ခုကို ရေး သားခဲ့သည်။ သူမမှာ Millersville University of Pennsylvania ၏ ကျောင်းသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး MySpace ပေါ်တွင် တင်ထားသော ပင်လယ်ဓားပြ ဦးထုပ် ဆောင်းထားရင်း အရက် သောက်နေသည့် "မူးနေ သော ပင်လယ်ဓားပြ" ဟု အမည်ပေးထားသည့် ဓာတ်ပုံ တစ်ပုံကြောင့် သူမ၏ သင်ကြားမှု ဘွဲ့မှာ ငြင်းပယ်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ၎င်းအား အစားထိုးမှုအနေနှင့် အင်္ဂလိပ်စာဘွဲ့ကိုသာ ရရှိခဲ့ သည်။
အင်တာနက် ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေး နှင့် နှင်းမုန်တိုင်း ဖျော်ဖြေမှု (Blizzard Entertainment)[ပြင်ဆင်ရန်]
၂၀၁၀ ဇူလိုင်လ ၆ရက်နေ့တွင် နှင်းမုန်တိုင်း ဖျော်ဖြေမှုသည် သူတို့၏(Blizzard Entertainment) ဂိမ်း ဖိုရမ်တို့တွင် သုံးသော နာမည်များ၌ နာမည်အရင်းများကို ဖော်ပြမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေငြာသည်။ ၂၀၁၀ ဇူလိုင်လ ၉ရက်နေ့တွင် နှင်းမုန်တိုင်း၏ အမှုဆောင်အရာရှိ (စီအီးအို) ဖြစ်သည့်ပြင် ပူး တွဲတည်ထောင်သူလည်း ဖြစ်သော Mike Morhaime (မိုက်(ခ်) မော်ဟာမင်)က နှင်းမုန်တိုင်း၏ ဖိုရမ်များတွင် ထိုသို့ဖိအားပေး၍ နာမည်ရင်းများ ဖော်ပြစေမည့် ကြေငြာချက်အတွက် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပေးသည့် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဖော်ပြပေးခဲ့သည်။ ထို ပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုမှာ သုံးစွဲသူတို့၏ ပြန်လည်တုံ့ပြန်တောင်းဆိုမှု တို့ကြောင့် ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အင်တာနက်_ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေး&oldid=437746" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၉ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၈၊ ၂၁:၃၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။